Iinkcazo zeMeta: Yonke into ekufuneka uyazi nge-SEO
Ngamanye amaxesha abathengisi abakwazi ukubona ihlathi lemithi. Njengoko enjini yokukhangela noun ifumene ingqwalaselo enkulu kule minyaka ilishumi idlulileyo, ndiqaphele ukuba abathengisi abaninzi bajolise kakhulu kwinqanaba nakwizithuthi ezithengiswayo, bayalilibala inyathelo elenzeka phakathi. Iinjini yokukhangela zibaluleke kakhulu kwishishini ngalinye 'ukukwazi ukuqhuba abasebenzisi ngenjongo kwiphepha elikwisiza sakho esondla injongo kwimveliso okanye kwinkonzo yakho. Kwaye inkcazo yemeta lithuba lakho lokunyusa amaxabiso afanelekileyo okucofa kwiinjini yokukhangela uye kwiphepha lakho.
Yintoni iNkcazo yeMeta?
Iinjini zokukhangela zivumela abanini besiza ukuba babhale iinkcazo malunga nephepha elirhubuluziweyo kwaye lingeniswe kwiinjini zokukhangela abazibonisayo kwiphepha leziphumo zeinjini yokukhangela (SERP). Iinjini zokukhangela zihlala zisebenzisa oonobumba bokuqala be-155 ukuya kwe-160 kwinkcazo yemeta yeziphumo zedesktop kwaye zinokuncitshiswa zibe zii-120 zabasebenzisi beinjini yokukhangela. Iinkcazo zeMeta azibonakali kumntu ofunda iphepha lakho, kubantu abarhubuluzayo.
Inkcazo yemeta ikwi Icandelo le-HTML kwaye lifomathiwe ngolu hlobo lulandelayo:
<meta igama="Inkcazo" umxholo="Ukupapashwa kweshishini likaMartech lokuphanda, ukufumanisa, kunye nokufunda ukuba ungasisebenzisa njani amaqonga entengiso kunye nentengiso kunye netekhnoloji yokukhulisa ishishini lakho."/>
Ichazwa njani iMeta kwiNkcazo?
Makhe sijonge oku kwiimbono ezimbini ezahlukeneyo ...
Injini yokukhangela ifumana iphepha lakho, nokuba likhonkco langaphandle, ikhonkco langaphakathi, okanye imephu yesayithi njengoko irhubuluza kwiwebhu.
Injini yokukhangela irhubuluza iphepha lakho, ihoya isihloko, izihloko, iiasethi zemithombo yeendaba, kunye nomxholo, ukumisela amagama aphambili afanelekileyo kumxholo wakho. Qaphela ukuba andibandakanyi inkcazo yemeta kule… iinjini zokukhangela azibandakanyi isicatshulwa kwinkcazo yemeta xa usenza isigqibo sokufaka isalathiso kwiphepha.
Injini yokukhangela isebenzisa isihloko sephepha lakho kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela (SERPukungena.
Ukuba ubonelele ngenkcazo yemeta, injini yokukhangela iyipapasha njengenkcazo phantsi kongeniso lwakho lwe-SERP. Ukuba awukhange ubonelele ngenkcazo yemeta, injini yokukhangela ikhomba iziphumo ngezivakalisi ezimbalwa abazibona zifanelekile kumxholo wephepha lakho.
Injini yokukhangela igqiba ekubeni ulibeka kanjani kwiphepha ngokusekwe kukuhambelana kwendawo yakho kwisihloko kunye nokuba zingaphi izixhumanisi ezifanelekileyo ezikwindawo yakho okanye iphepha elibekwe kuyo ngokwemigaqo abakukhombise ngayo.
Injini yokukhangela UCanzibe ikwabeka kwinqanaba lakho ngokusekwe ekubeni ingaba abakhangeli abakhange bacofe kwiziphumo zakho ze-SERP bahlala kwindawo yakho okanye babuyela kwi-SERP.
Umsebenzisi ophendulayo ufaka amagama aphambili okanye umbuzo kwiinjini yokukhangela nakwimihlaba kwi-SERP.
Iziphumo ze-SERP zibhalwe igama lomntu, xa kunokwenzeka, kumsebenzisi weinjini yokukhangela ngokusekwe kwijografi kunye nembali yokukhangela.
Umsebenzisi wokukhangela uskena isihloko, i-URL, kunye nenkcazo (ethathwe kwinkcazo yemeta).
Amagama aphambili (amagama) asetyenzisiweyo enjini yokukhangela abonakalisiwe kwinkcazo yesiphumo se-SERP.
Ngokusekwe kwisihloko, i-URL, kunye nenkcazo, umsebenzisi ophandayo uya kuthatha isigqibo sokuba ucofe kwikhonkco lakho okanye hayi.
Umsebenzisi ocofa kwikhonkco lakho ufika kwiphepha lakho.
Ukuba iphepha lifanelekileyo kwaye linomxholo kukhangelo abalwenzileyo, bahlala kwiphepha, bafumane ulwazi abaludingayo, kwaye banokuguqula.
Ukuba iphepha alichanekanga kwaye lihambelana nokhangelo abalwenzileyo, babuyela kwi-SERP kwaye bacofe kwelinye iphepha… mhlawumbi okhuphisana nabo.
Ngaba iinkcazo zemeta ziyazichaphazela izikhundla zokukhangela?
Lowo ngumbuzo olayishiwe! uphando umemezele ngo-Septemba ka-2009 ukuba iinkcazo zeemeta okanye amagama aphambili kwimeta kwiGoogle ubuchule obusezingeni kukhangelo lwewebhu… kodwa ngumba wombuzo othe ngqo ofuna ingxoxo eyongezelelweyo. Ngelixa amagama kunye namagama aphambili ngaphakathi kwenkcazo yemeta yakho angazukubeka kwinqanaba ngqo, banefuthe lokuziphatha kwabasebenzisi beenjini yokukhangela. Kwaye indlela yokuziphatha yomsebenzisi weinjini yokukhangela ibaluleke kakhulu kuluhlu lwephepha lakho kwiziphumo zokukhangela ezifanelekileyo.
Inyani yile, kokukhona abantu abacofa-ukuya kwiphepha lakho bonyusa amathuba okuba bafunde kwaye babelane ngephepha. Okukhona kunokwenzeka ukuba bafunde kwaye babelane ngephepha, kokukhona kungcono ukubekwa kwinqanaba lakho. Ke… ngelixa iinkcazo zemeta zingachaphazeli ngqo ubume bephepha lakho kwiinjini zokukhangela, zinempembelelo enkulu kwindlela yokuziphatha komsebenzisi… eyona nto iphambili ekubekweni!
Inkcazo yeMeta Umzekelo
Nanku umzekelo ukukhangela, for martech:
Ndibonisa lo mzekelo kuba ukuba umntu uvele wakhangela "i-martech", banokuba nomdla nje kwinto eyi-martech, hayi ukuba bafunde ngakumbi ngayo okanye bafumane upapasho. Ndonwabile ukuba ndilungile phaya kwiziphumo eziphezulu kwaye ndingakhathazeki kakhulu ukuba ukwenziwa kweenkcazo zeemeta kungakhokelela ekubonakalweni okukhulu.
Inqaku elisecaleni: Andinalo iphepha elibiziweyo yintoni martech? Esi sisicwangciso esiliqili esihle kum sokuhambisa enye kuba sele ndikwinqanaba eliphezulu kule kota.
Kutheni le nto iMeta yeNgcaciso ibalulekile kwiiCwangciso zokuKhangela zeOrganic?
Injini yokukhangela Iinjini zokukhangela zifuna ukubonelela abasebenzisi bazo ngamava aphezulu kunye neziphumo zokukhangela ezikumgangatho ophezulu. Ngenxa yoko, inkcazo yemeta yakho ibalulekile! Ukuba uphakamisa ngokuchanekileyo umxholo wakho ngaphakathi kwenkcazo yemeta, khohlisa umsebenzisi weinjini yokukhangela ukuba atyelele iphepha lakho, kwaye uzigcine apho… iinjini zokukhangela zizithembile kwindawo yakho kwaye zisenokwandisa isikhundla sakho ukuba amanye amaphepha aphezulu abangela abasebenzisi .
Abasebenzisi beSesha -Ikhasi lesiphumo se-injini yokukhangela enesicatshulwa esingahleliwe esivela ngaphakathi kumxholo wephepha linokungakhohlisi umsebenzisi weinjini yokukhangela ukuba acofe kwiphepha lakho. Okanye, ukuba inkcazo yakho ayihambelani nomxholo wephepha, banokuhamba kungeno elilandelayo le-SERP.
Ukulungiselela inkcazo yemeta yeyona into ebalulekileyo kwiphepha le-SEO kwiphepha ngezizathu ezimbalwa:
Umxholo ophindwe kabini - iinkcazo zeemeta zisetyenziselwa ukumisela ukuba unayo okanye awunayo ukuphinda umxholo ngaphakathi kwendawo yakho. Ukuba uGoogle ukholelwa ukuba unamaphepha amabini anomxholo ofanayo kunye neenkcazo ezifanayo zeemeta, baya kuthi babekwelona phepha liphezulu kwaye bangazihoyi ezinye. Sebenzisa iinkcazo zeemeta ezizodwa kwiphepha ngalinye kuya kuqinisekisa ukuba amaphepha awarhubuluzi kwaye azimisele ukuphinda umxholo.
Internet - Ngelixa Internet isetyenziswe kwi iinkcazo zemeta ungachaphazeli ngokuthe ngqo inqanaba lephepha lakho, kodwa kunjalo Isibindi kwiziphumo zokukhangela, ukutsala ingqalelo kwisiphumo.
Cofa-ngokusebenzisa amaxabiso - Inkcazo yemeta ibalulekile ekuguqulweni komsebenzisi weinjini yokukhangela ibe lundwendwe lwesiza sakho. Sisebenza kunye nabaxhasi ukuqinisekisa ukuba iinkcazo zabo zeemeta ziheha kakhulu umsebenzisi we-injini yokukhangela, ngokusetyenziswa kwamagama aphambili njengokugxila kwesibini. Ilingana nenqaku lakho lokuqhuba umntu ukuba athathe inyathelo.
Iingcebiso zokuphucula iiNkcazo zeMeta:
Ubuzala ibalulekile. Ngophendlo lweselfowuni ekunyukeni, zama ukunqanda iinkcazo zemeta ezingaphezulu kwe-120 ubude.
kuphephe iinkcazo zemeta eziphindiweyo kwindawo yakho yonke. Yonke inkcazo yemeta kufuneka yahluke, kungenjalo injini yokukhangela inokungayihoyi.
Sebenzisa ukuphindaphinda Oko kwenza ukuba umfundi afune ukwazi okanye ayalele isenzo sabo. Injongo apha kukuqhuba umntu ukuba acofe kwiphepha lakho.
Thintela ikhonkco iinkcazo zemeta. Abasebenzisi abothusayo ngokubenza bacofe kwaye bangalufumani ulwazi oluchazileyo sisenzo esibi seshishini esiya kwenzakalisa amandla akho okuzibandakanya kunye nokuguqula iindwendwe zenjini yokukhangela.
Nakuba amagama ayizukunceda ngokuthe ngqo inqanaba lakho, kodwa baya kulinceda izinga lakho lokucofa kuba amagama aphambili abonakalisiwe njengoko umsebenzisi wenjini yokukhangela efunda iziphumo. Zama ukusebenzisa amagama aphambili kufutshane namagama okuqala kwinkcazo yemeta.
Monitor Zombini inqanaba lakho kunye nokucofa kwakho amazinga… Zama uvavanyo lwe-A / B apho uhlaziya khona inkcazo yemeta yakho yenyanga kwaye ubone ukuba ungalonyusa uguquko.
Inkqubo yakho yoLawulo lweMixholo kunye neeNkcazo zeMeta
Nokuba usebenzisa i-squarespace, i-WordPress, iDrupal, okanye enye CMS, Qiniseka ukuba banako ukutshintsha inkcazo yemeta yakho. Kwiiplatifti ezininzi, inkcazo yemeta ayicacanga kakhulu kungafuneka uyikhangele. KwiWordPress, Inqanaba leZibalo yeyethu ngcebiso kwaye inika umsebenzisi imbonakalo enkulu yenkcazo yemeta njengoko ijongwa kwidesktop okanye kwiselfowuni.
Ngalo lonke ixesha upapasha iphepha okanye unqwenela ukulenza libe lilungile, ndiza kuphumeza ngokupheleleyo inkcazo yemeta ngaphakathi kwenkqubo yokunyusa izinga lokucofa kwakho kwaye uqhube abasebenzisi be-injini yokukhangela enkulu ukuya kwishishini lakho.
tags: uqhagamshelwanoizinga lokucofaukuphinda umxholoingakanani inkcazo yemetabangaphi abalinganiswa yinkcazo yemetaUkusetyenziswa kwegama elingundoqoamagamainkcazo yemetaubude benkcazo yemetaiinkcazo zemetameta amagama aphambiliinyokaIingcebiso zokuphucula iinkcazo zeemeta
Agasti 14, 2010 kwi-8: 57 AM
Ingcebiso enkulu. Esinye sezixhobo zam endizithandayo ze-WordPress All-in-One SEO sivumela ukuba senze iitiltes zephepha ezilula kunye neenkcazo ngaphandle kokwazi okuninzi malunga nekhowudi. (Ngendlela, uye wasazisa kwi-All-in-One) enkosi kuwo omabini amanani.
Agasti 14, 2010 kwi-11: 23 AM
I-Lorraine, i-AIOS kunye ne-Google XML Sitemaps zimbini zam 'kufuneka zibe nazo' kuyo nayiphi na indawo ye-WordPress. Ndimangalisiwe kukuba i-WordPress ayikhange ibafake nje kwikhowudi engundoqo okwangoku. I-WordPress ikufumana kuphela malunga ne-75% apho…. ezo plugins zenza iqonga lakho lisebenze ngokupheleleyo!
Meyi 17, 2013 kwi-2: 41 PM
Iposti eyoyikekayo njengesiqhelo! Bendithetha ngale nto ekuqaleni kweveki neqela. Enkosi Doug.
Meyi 17, 2013 kwi-2: 44 PM
Enkosi @jrdorkin:disqus !
Meyi 18, 2017 kwi-6: 35 PM
Ndingamangaliswa kakhulu ukufumana umntu ozimiseleyo malunga nokukhuthaza umxholo wabo kwiwebhusayithi engenayo inkcazo yemeta. Xa ndisebenza nabantu ndiyabaxelela ukuba inkcazo yemeta ngumzimba wentengiso ebekwe kuGoogle. Ngaba ungazama ukuthengisa into ethile kwiphephandaba lakho ngaphandle kwenkcazelo yaloo nto? Akunjalongo noko!
Meyi 19, 2017 kwi-8: 29 AM